Daawo Caruurta Soomaaliyeed gaar ahaan Gabdhaha yar yar ee Yurub ku nool oo dhaqankooda qaab farsameeysan.. - iftineducation.com
iftineducation.com – Dawladaha reer Yurub ayaa xiliyada Fasaxa waxa ay Caruurta Iskuuleeyda ah ku mashquuliyaan Qalab casri ah oo ay ku ciyaaraan ama waqtiyadooda firaaqada ku dhumiyaan. Caruurta Ajaanibta ah ee ku nool dalalka Yurub ayaa si wada jir ah loo mashquuliyaa ama loo ciyaarsiiyaa.
Halkaan ka Daawo Gabdho Soomaaliyeed oo Asturan oo u Niikinaya qaabka Gabdhaha reer Yurub.
Waalidiinta Soomaaliyeed ayaa intooda badan ku mashquulsan Shaqooyinka iyo hoowlaha guud ee Guriga balse Caruurta ayaa Xaafadaha dhexdooda loo keenaa Qalab ay ku ciyaaraan iyo goobo qaas ah oo ay ku mashquulaan.
Mararka qaar waxaad arkeeysaa Caruur Soomaaliyeed gaar ahaan Gabdho yar yar oo si wanaagsan u Asturan oo hadane dhanka kale u dheelaya ama u Niikinaya sida Gabdhaha Cadaanka ah waxaana aad u adag Kiiskooda in ay ogaadaan Waalidiintooda. Muuqaalkaan waxaad ka daawan doontaan Dhaqanka Gabdhaha yar yar ee Soomaaliyeed sida uu isku badalay waxeeyna arintaan ka dhacday magaalada Venlo oo ku taala xuduuda dalalka Holland iyo Germany.
Gabdhaha yar yar ee Soomaaliyeed ayaa mararka qaar ku dayda Gabdhaha Cadaanka ah iyo Ajaanibta kale waxa ay sameeyaan waxaana Nasiibdaro ah Gabdho yar yar oo Soomaaliyeed si weeyna u Asturan in ay iska dhigaan ama u niikiyaan qaabka lagu yaqaan Gabdhaha reer.
Halkaan Ka Daawo Muuqaalka Caruurta Soomaliyeed Oo Dhaqankooda La Badalayo
DAAWO Film Kartuun lagu aflagaadeynayo Madaxweynaha Puntland & Wiilashiisa oo lasoo dhigay youtube